Kumele ihlolisiswe imikhiqizo esetshenziselwa ukhuvethe - Bayede News
Kubungazwa amagalelo embokodo kwezemidlalo
Ngabe isesimweni esilungele ukusetshenziswa ngabantu imikhiqizo edingeka kangaka muva nje, esetshenziswa ubuthaphuthaphu? Sekubonakala kuyinto asebeyamukele abaseNingizimu Afrika ukuhamba bekhangeza baconsiselwe uketshezi olubizwa ngesanithayiza noma yikuphi lapho kumele bangene khona. Angikaze ngimbone obuzisisayo ukuthi ngabe uketshezi athelwa ngalo lunhloboni. Emva kokuthelwa olunye lusheshe lome ezandleni kanti olunye luthatha isikhashana ukoma ezandleni, bese kuthi olunye luzishiye zinamfuka ngendlela engajwayelekile. Angikaze ngibuze ukuthi kanti zingaki izinhlobo zesanithayiza. Engikwaziyo wukuthi abezempilo bagcizelela ukuthi phakathi kwezinongo ezifakwe kusanithayiza kumele kube nekhemikhali elibizwa nge-alkhoholi olujwayele ukusetshenziswa uma kuvutshelwa utshwala.
Ngokunjalo uma sihamba sibona izinhlobonhlobo zezimfonyo. Ezinye zinemilomo ecijile, ezinye zihlobisekile zinezimbobo kanti ezinye zibukeka zakhiwe ngokusaliphepha. Umbuzo ohlale ungifikela ngothi ngabe yisiphi isimfonyo esisemthethweni futhi ngubani oqikekela ukuthi abantu bavikelekile ngezimfonyo abazigqokile. Kungenzeka yini ukuthi sishaye sidadlaze sicabange ukuthi sizivikele kanti sinqunu? Ngubani okufanele aqikekele ukuthi isizwe siphephile ngezimfonyo ezigqokwayo? Okwamanje abomthetho nabezempilo babukeka banelisekile nje wukuthi uma umuntu ezimboze umlomo kunokuphepha.
Yiziphi izinhlelo ezenziwe uHulumeni ukuqikekela ukuthi imikhiqizo edayiselwa abantu isesimweni esifanelekile noma iwenza ngokuphelele umsebenzi okuthiwa iyawenza? Baningi abanele babona ukuthi kulula ukwakha izimfonyo bathuntutha izindwangu baqala bagijimisa imishini bethunga okuyizimfonyo. Alukho uhlelo olwenziwe lokuqikekela ukuthi lokho okusetshenziswa njengezimfonyo kushiya abantu bephephile. Ukhuvethe luyinto entsha esizweni futhi umuntu ufunda zonke izinsuku okusha okwenziwa wukhuvethe.
Kunabantu abaningi ababone ithuba lokuzicebisa ngokukhiqiza uketshezi olubizwa ngesanithayiza, bangayilandeli imigomo yokukhiqizwa kwalowo mkhiqizo. Isanithayiza iqhamuke njengezindleko ezintsha kulelo nalelo bhizinisi, osekufanele usomabhizinisi ayifake ngaphansi kwezindleko zebhizinisi njengento esebenza usuku nosuku. Uma uzibuza ukuthi ibhizinisi elivakashelwa ngabantu abaningi lisebenzisa amalitha amangaki ngosuku kungakucacela ukuthi iyizindleko isanithayiza.
Baningi abantu abebengalazi igama elithi ‘sanithayiza’ ezinyangeni ezine ezedlule kodwa kube kuyinto ebaluleke kangaka empilweni yabantu. Ngokushesha okukhulu leli gama selaziwa nayingane encane.
Inhlangano eqinisekisa ukuthi imikhiqizo isezingeni nasesimweni esifanelekile, iSouth African Bureau of Standards (SABS) imatasa izama ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo edayiselwa abantu yenziwe ngendlela yini. Ekhuluma okhulume egameni lale nhlangano iSABS uMnu uJodi Scholz uthe kunezikhalo ezifinyelele emahhovisi abo ezikhala ngezimfonyo ezinophawu lwakwaSABS kodwa ezingekho ezingeni elifanelekile. Akuvumelekile ukuba umkhiqizi azifakele yena uphawu lwakwaSABS umkhiqizo ungahlolwanga ukuthi ukulungele yini ukusetshenziswa.
Ukuze umkhiqizo ulungele ukubekwa uphawu lweSABS kumele umkhiqizi alandele izindlela ezihleliwe zokwakha umkhiqizo uphume unezilinganiso ezivumelekile. Uma kwenziwa isanithayiza kunesilinganiso esisemthethweni se-alkhoholi nesamanzi kanye nokunye okuyizithako ezenza umkhiqizo wenze umsebenzi olindelekile ekugcineni futhi ungabi yingozi kulabo abazowusebenzisa ukuhlanza izandla. Uma kungalandelwanga izilinganiso ezisemthethweni kunengozi yokuthi ilimaze isikhumba somuntu. Yikho konke lokho okuqinisekiswa yizilinganiso zeSABS. Emva kokuba sewuqediwe ukwenziwa umkhiqizo uyahlolwa ukuthi ukulungele yini ukusetshenziswa. Uma uhlangabezana nezilinganiso zeSABS kuyaye kuvunyelwe ukuba ufakwe uphawu lweSABS.
Inhlangano iSABS ithi seyizibekile esizindeni sayo izinyathelo okumele zilandelwe ukukhiqiza izimfonyo ezisemthethweni. Kuyiqiniso ukuthi akulula ukuhlola amasanithayiza asezindaweni ezehlukahlukene ezihanjelwa ngabantu ukuthi anesilinganiso esifanelekile yini.
UHulumeni umemezele ukuvulwa kwezikole kwafuneka kusetshenziswe amasanithayiza kuzo zonke izikole eziyizinkulungwane ukuze kuqinisekiswe ukuthi igciwane alingeni kothisha nezingane. Amukho obehlola imikhiqizo ngaphambi kokuba isetshenziswe kuleso naleso sikole ukuthi isezingeni elifanelekile yini ukuvimba amagciwane. Azikho izinhlelo zokuhlola le mikhiqizo esetshenziswayo ukuthi isezingeni eliyilo ngempela na.
Kuthanda ukwethusa uma uMnu uScholz wakwaSABS ethi kunabantu abadayisa imikhiqizo bafake uphawu lwakwaSABS bengazange bayihlole. Kumanje abakwaSABS baphezu kophenyo emva kokuthola imibiko yokuthi kunabathile abasebenzisa uphawu lwakwaSABS emikhiqizweni yabo bengalutholanga ngokusemthethweni.
Ngokwenza kanjalo laba badayisi bakhokhisa imali kube sengathi imikhiqizo yabo ihloliwe kanti phinde. Lokhu kuwubugebengu okumele kuliwe nabo ukuze kungalithunazi igama leSABS, ikakhulukazi uma leyo mikhiqizo itholakala ingekho ezingeni elifanelekile.
Ngiyacabanga ukuthi siyavumelana ukuthi kuvuleke ithuba elingalindelwe muntu ngokuqala ukusetshenziswa kwesanithayiza, abanye babona ithuba lebhizinisi.
Ngolwazi abalutholayo oluncane baningi abaqalile ukwakha isanithayiza, kwesinye isikhathi bengaqikekeli izilinganiso eziyizo zezithako. Lokhu kuyingozi enkulu kwabathemga isanithayiza engahlolisisiwe. Ingalimaza isikhumba somuntu, imshise nokumshisa uma eyisebenzisa.
nguLindani Dhlomo Aug 7, 2020